Ihe ị ga-eme na Benidorm | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | España, Osimiri
Oge oyi ọ bụ maka oge ọkọchị? N'ezie! Ọ bụ mgbe anyị na-atụ uche anyanwụ ma na-ekpo ọkụ kachasị, yabụ na-eme ka ịchọọ ịhazi oge ezumike oge ọkọchị gị. Iche echiche banyere nke ahụ taa anyị ga-ekwu maka ya Benidorm, n'ụsọ oké osimiri Alicante, na Spain.
Osimiri, njem nleta di iche iche, abali, okike, otutu anwu. Nke ahụ bụ ihe Benidorm bụ, ya mere, jiri nlezianya gụọ post a ma chekwaa ya maka mgbe ụbọchị oyi na-abịa ma ịchọrọ ka a fụchie ya na ájá ọlaedo ya. Anyị agaba.
2 Ihe ị ga-eme na Benidorm
Mpaghara ebe a okpomọkụ ebe Ndị Alakụba bi ya n'oge ahụ n'agbanyeghị na enwere ihe akaebe banyere ụzọ ndị Rome gara aga, dịka ọmụmaatụ. Na narị afọ nke iri na atọ ndị Spain sụgharịrị ya mana ọ bụghị na oge dị jụụ bidoro ka ọgụ nke ndị ohi Ottoman na ndị mba ọzọ na-esochi ya.
Ọ malitere ịmalite karịa mmadụ, ịrara onwe ya nye ịkụ azụ na ikwe ka ọrụ ugbo, mmepe nke were rue etiti narị afọ nke XNUMX.
Ọ bụ maka N'afọ ndị 50 na tupu nsogbu dị na ngalaba ịkụ azụ, compass ahụ amalitela ịmaliteghachi azụ ụlọ njem nleta. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-ekwu na ihe dị ka nde mmadụ ise na-abịa kwa afọ.
Na-ekwu okwu banyere ọdịdị ala obodo ahụ dị n’elu ugwu n’etiti osimiri abụọ. N'otu oge ahụ kewara n’ime ụzọ ise onye nke ọ bụla nwekwara nke ya. Enwere obodo ochie, El Castell, Westeros, Levante, nke ọ bụla n'ime ha abụọ nwere osimiri nke ya, La Cala na El Rincón de Loix.
N'etiti osimiri abụọ ahụ, e nwere nkume na-agba na ọdụ ụgbọ mmiri nke Benidorm. Imebe obodo bụ amamihe nke nwere mbinye aka nke Pedro Zaragoza Orts, onye isi obodo na 50s.
Dị ka gị Nnukwu atụmatụ atụmatụ Buildinglọ ọ bụla kwesịrị inwe ebe ntụrụndụ nke ya, na-ahụ oge na ihe niile agaghị akwụsị ịbụ mkpokọta ụlọ. Nsonaazụ dị ọcha, dị ka a pụrụ isi kwuo ya. Na njedebe, Benidorm na-ejikọ ụgbọ okporo ígwè na Alicante na Dénia. Na Alicante ugbu a a tram ọrụ na-arụ ọrụ ọ bụla ọkara awa na ụgbọ okporo ígwè na Dénia na-arụ ọrụ awa ọ bụla.
Ndi bekee, ndi Dan, ndi Belgium, ndi Dutch, ndi Jamani na ndi Irish huru Benidorm n’anya. O nwere ike ịbụ n'ihi anwụ dị egwu na oke oyi? N'ezie ee.
Osimiri na-ebu ụzọ ka anyị mata ha. Ndị kasị ewu ewu na ndị mmadụ bụ Osimiri Levante. Ọ bụ otu n'ime osimiri a kacha mara amara na Europe, kwa, ọ nwere nke ya n'afọ niile. O were kilomita abụọ site na Punta Pinet ruo Punta Canfali. Ejiri ájá ọla edo mara mma mee ya ma mmiri ya dị jụụ ma nwekwaa nghọta.
Levante nwere ọtụtụ ọrụ, Sunbeds 4.600, nche anwụ 1.400, mpaghara iri na itoolu, ụkwụ iri na itoolu maka ụkwụ, ịga ije iji zere aja na-agba ọkụ, ụlọ mposi abụọ nke obibi, ebe egwuregwu maka ụmụaka na ndị na-azọpụta ndụ. Na mgbakwunye na ọtụtụ ụlọ nri na ụlọ mmanya. O nwere obosara nke mita 19 ọ bụ ezie na ọ ruru n'akụkụ ihe dị ka mita 55.
Osimiri ọzọ a ma ama bụ Osimiri Poniente, n’ebe ndịda ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọ bụ ya kachasị ogologo na Benidorm na kilomita atọ n’ogologo. Bụ a osimiri osimiri nwere mbadamba ohuru na nke ohuru nke Carlos Ferrer haziri na otutu Ogwe, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ụlọ oriri na nkwari abalị. Ọrụ ndị ọzọ bụ ihe ndị a na-ahụkarị: mmiri ozuzo, oche oche, nche anwụ, egwuregwu. Na Levante na Poniente enwere otutu anyanwụ n’afọ niile, ọbụlagodi n’oge oyi.
N'etiti osimiri abụọ a, na obodo ochie na n'okpuru ndo nke na-etolite ugwu Canfali, enwere obere ụlọ mara mma a na-akpọ Ihe ojoo. N'ihu ya ka Agwaetiti Benidorm nke bụ ebe amaara ama maka ndị na-akụ mmiri na nsị n'ihi na ọ nwere ebe a na-egwu mmiri, La Llosa, nke bụ ebe nchekwa mmiri dị mkpa. Osimiri a na-edebe mmiri na-adịkarị mita 120, nwee ájá ọla edo ma bụrụ ebe dị jụụ. Oh, ma nweela Blue Flag kemgbe 1987.
Na mgbakwunye na Mal Pas Cove ị nwekwara ike ịga na Tio Ximo cove na La Almadrava cove. Nke mbụ dị na ụkwụ Sierra Helada na ebe ugwu obodo ahụ. Ọ zoro n'etiti ugwu abụọ dị elu, nwere kristal doro anya, ọ dịkwa mma maka nsị. Ọ dị obere mita 60 n'ogologo ma a na-agwakọta ájá na okwute mana ọ dabara nke ọma na ọ nwere ndị nchekwa ndụ, nche anwụ na oche oche.
N'akụkụ ya, La Almadrava cove dị na ụkwụ nke Sierra Helada ma rute otu narị mita n'ogologo. N'okpuru mmiri ya doro anya enwere ọtụtụ ndụ mmiri na akwa akwa, n'ihi ya, ọ bụrụ na ịchọrọ mmiri mmiri ma ọ bụ nsị ọ ga-abụ ebe ị na-aga. Naanị ya na-enye sunbeds 47 yabụ egbula oge.
Ndi Benidorm nwere ndụ abalị? N'ezie! N'ime obodo enwere gburugburu Publọ mmanya 160 ma ọ bụ discos ha nọkwa ebe niile, na njem, na obodo ochie, n'okporo ụzọ, na mpụga n'akụkụ Altea gbara agbata obi. E nwere nnọọ ewu ewu na mpaghara maara dị ka Mpaghara Bekee nke akara n'okporo ámá Ibiza, Mallorca, Gerona na London. Dị ka ị nwere ike iji anya nke uche gị ebe a, ụlọ mmanya, biya, mmanya, egwu dị egwu na ndị si n'akụkụ ụwa niile juputara n'abalị niile.
Na mgbakwunye, Benidorm nwere a circo, a na-akpọ ebe ngosi Idlọ Benidorm, cha cha, ihe ịma aka ochie, bingo na nke kachasị mma, maka ndị na-a drinkụ nnukwu mmanya na mmanya na-egbu ọrụ a na-akpọ Microparty.
Ọ bụ obere ụgbọ ala na-eburu ndị na-aga oriri na nkwari. Ọ na-arụ ọrụ n'etiti elekere asatọ nke ụtụtụ na elekere asatọ nke ụtụtụ na bọs ọ bụla na-eburu ihe ruru mmadụ 8 na ọnụahịa nke euro 8. A na-akpọrọ otu a gaa diski ise, ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ mmanya na mpaghara ahụ.
Nwere ike ịdebanye aha maka ọrụ Microfiesta a ruo elekere 24 tupu ị kwụọ ụgwọ tupu. Mpaghara ebe ọ na-arụ ọrụ bụ Sella, Finestrat, ASIfaz del Pi, la Nucia, Villajoyosa, Relleu, Polop na Callosa d'en saria. Nwetụla mgbe ị na-eme ndị mmadụ otu? Ọ bụ ihe dị ka nke ahụ mana ọ na-anya moto.
N'ikpeazụ, obodo na-ahazi ihe omume mgbe niile. Ndị kasị ama niile bụ na ọ na-ewe ebe kemgbe 1959, na Benidorm Abụ Ememme. A na-emekwa ememme egwu Indie ebe ọ bụ na 2010. Dị ka ị pụrụ ịhụ, obodo Spanish a nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye na njem nleta. Ekwenyesiri m gị ike ịga?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-eme na Benidorm
Kedu otu esi ahọrọ họtelu iso ụmụaka